Twins ANC, Fresh´n Rebel ghọrọ usoro ihe ịga nke ọma | Akụrụngwa Akụkọ
Twins ANC, Fresh´n Rebel ghọrọ usoro ihe ịga nke ọma
Miguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | Emelitere ka 10/06/2021 12:46 | General, Nyocha
So ndị na-adịbeghị anya mwepụta nke Fresh´n Rebel Clam Elite, Firmlọ ọrụ ahụ ekpebiela inye ume nke ikuku Twins, ekweisi olu ya nwere nke ANC nke nwetaworo ọtụtụ nyocha dị mma. Ugbu a, ha ga - enwe atụmatụ ga - eme ka nzụta gị bụrụ ihe na - adọrọ adọrọ, mkpọtụ mkpọtụ na - arụ ọrụ.
Anyị nyochara omimi Twins ANC ọhụrụ site na Fresh´n Rebel, ekweisi ekweisi ezi na kagbuo mkpọtụ yana atụmatụ mara mma nke ukwuu. Nọnyere anyị ma chọpụta ozi ọma Fresh'n Rebel chọrọ maka ụdị ekweisi TWS a nke anyị maara na mbụ.
2 Nka na ụzụ na obodo kwụụrụ
3 Nkagbu mkpọtụ na njikwa na-ada ụda
4 Ọdịyo ọdịyo na ahụmịhe onye ọrụ
N'okwu a Fresh´n Rebel kpebiri ịkụ nzọ na agba ya a maara nke ọma, anyị ga-enwe ha, nke ọ bụla nwere aha azụmahịa ya na ụda ndị a: Gold, pink, green, red, blue and black. N'okwu a, igbe ahụ agbanweela nnukwu mmezigharị, na-aga site na ịbụ usoro mmeghe dị elu na ụdị "shei". Igbe ahụ nwere akụkụ dị oke oke nwere nnukwu akụkụ maka nchekwa dị mfe. Maka akụkụ ya, n'ime anyị ga-enwe akara ngosi nke ọnọdụ nke ekweisi yana bọtịnụ mmekọrịta.
Igweisi ekweisi na ntị, a na-ahụkarị maka ekweisi TWS mgbe ha nwere mkpọtụ mkpọtụ nọ n'ọrụ. Ha nwere atụmatụ nke anyị ga-amata, na-enweghị ogologo oke, ha sara mbara. Banyere nkasi obi, ha dị ọkụ ma nwee mpempe akwụkwọ dịgasị iche, yabụ anyị agaghị enwe nsogbu na ntinye ha. Mkpokọta ịdị arọ nke ngwaọrụ ahụ bụ gram 70, ọ bụ ezie na anyị amaghị ma nha ziri ezi nke ikpe na-ebu ya na ibu nke ekweisi iche iche. Agbanyeghị, anyị ga-ekwusi ike na anyị nwere nguzogide mmiri, ọsụsọ na uzuzu nwere asambodo IP54, yabụ anyị nwere ike iji ha zụọ n'enweghị nsogbu.
Nka na ụzụ na obodo kwụụrụ
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị amaghị kpọmkwem ụdị nke Bluetooth nke na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na ị na-eburu ọsọ ọsọ na nnwere onwe, ihe niile na-egosi na Fresh'n Rebel ahọrọla maka Bluetooth 5.0 nkịtị. Anyị nwere ihe mmetụta dị nso nke ga-akwụsịtụ ọdịnaya nke mgbasa ozi ozugbo anyị wepụrụ ha na ntị anyị, otu ihe ahụ ga-eme ma anyị weghachite ha, na egwu ga-aga n'ihu na-ada site na ebe ọ dị. Ihe bụ ihe ọzọ, ekweisi bụ Abụọ Nna-ukwu, ya bụ, ha nwere ike iji iche iche ebe ha abụọ jikọtara ya na isi iyi.
Banyere obodo kwụụrụ onwe anyị, anyị enweghị data gbasara ikike dị na MA, mana anyị enwetala ihe dịka awa asaa nke nnwere onwe ya na ekweisi n'otu oge, lPromisesdị ahụ kwere nkwa n'etiti awa 7 na 9 dabere na ọnọdụ ịkagbu mkpọtụ nke anyị rụọ ọrụ, data dabara na nyocha anyị. Ọ bụrụ na anyị gụọ ebubo ebubo nke ikpe ahụ, a na-agbatị aka ahụ ruo ihe dị ka awa 30 na mkpokọta ma ọ bụrụ na anyị anaghị arụ ọrụ ANC, nke nwere ike ịdaba na 25 awa ma ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ ya. Maka akụkụ ya, ụgwọ zuru ezu nke igbe ahụ ga-abụ awa abụọ, ihe dị ka elekere na ọkara ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ isi.
Nkagbu mkpọtụ na njikwa na-ada ụda
Nkagbu mkpọtụ ga-eme ihe mgbe anyị mere ya, n'ihi nke a, anyị ga-emetụ ekweisi aka, ebe ha nwere ogwe aka. Tụkwasị na nke a, anyị nwere ike ịhọrọ maka “Ọnọdụ gburugburu ebe obibi” nke ga - eweghara akụkụ nke mkpọtụ ahụ site na igwe okwu iji wee nyee mwepu iche nke pere mpe maka ọnọdụ ụfọdụ.
Mgbasa ụda mkpọtụ: Ọ ga-akagbu mkpọtụ niile nwere ikike kachasị.
Ọnọdụ ikuku: Ọnọdụ a ga-akagbu mkpọtụ na-ewe iwe na ugboro ugboro mana ọ ga-enye anyị ohere ijide mkparịta ụka ma ọ bụ ihe ngosi site na mpụga.
Nkagbu mkpọtụ zuru ezu maka ọnụahịa ọnụahịa anyị na-ejikwa, O doro anya na ha dịtụ anya site na ndị ọzọ dịka AirPods Pro, agbanyeghị, ọ bụrụhaala na anyị na-edebe pad ahụ nke ọma, nkagbu mkpọtụ ga-adọrọ mma. O yighị ka ọ na-emetụta bass na mids na ule anyị, ọ bụ ezie na anyị na-akwụsị ịghọta ụfọdụ ụda siri ike. N'akụkụ a, anyị enweghị ike ịta ya ma ọ bụrụ na anyị eleba anya n'ahịa na ọnụahịa nke ndị ọzọ na-enye site na ịkagbu mkpọtụ na-arụ ọrụ nke anyị nwere ike ịkpọ.
Ọdịyo ọdịyo na ahụmịhe onye ọrụ
Ọ na-efu na Fresh'n Rebel ahọrọla ijikọta Twins ANC n'ime usoro nhazi ahaziri iche nke anyị hụrụ na Clam Elite. Ka o sina dị, ekweisi na-abata nke ọma iji mee ka ha dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ na-emekarị n'ụdị ngwaahịa a, ha na-akpan na-akụ na-enye a mma n'ihi na ugbu a azụmahịa music. Anyị nwere ezigbo ọnụnọ bass na oke elu dị elu, ihe dị ịtụnanya na-atụle na anyị ga-ejikọ ya na nkagbu mkpọtụ na-arụ ọrụ.
Na njikọta ha enweghị nsogbu ọ bụla, jikọọ ngwa ngwa ma dịtụ mfe, dịka ọ dị mgbe ịnọ Abụọ Nna-ukwu Anyị enweela ike iji ya mee ihe mgbe ụfọdụ naanị izute otu ekweisi. Ha jikọtara ngwa ngwa na isi iyi ọdịyo n'otu ụzọ ahụ ha si kwụpụ ma kwụsị egwu ahụ mgbe anyị tinyere ha n'okwu ahụ, na ngalaba a ahụmịhe ahụ adịla mma. Na ọkwa nke ijide olu anyị site na igwe okwu, ha zuru oke iji mee mkparịta ụka, ọ bụ ezie na nke a abụghị isi okwu ya kachasị dị ịrịba ama, ọ naghị enye ahụmịhe anyị nwere ike ịtụle dị ka ihe ọjọọ.
na eziokwu bụ na ha anaghị ahapụ akụkụ ọ bụla nwere ajọ uto n'ọnụ na ntị ya. Okwu ikpe na-adaba adaba, na-agbanwe agbanwe ma na-adịgide adịgide. Maka akụkụ ya, ekweisi na ntị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu na ekweisi ANC wee daa n'ime "nkịtị". Obi abụọ adịghị ya na ọ dị ọhụrụ ma mara mma na-enye onyinye site na akara nke lekwasịrị anya na ndị na-eto eto nke na-achọ ịmepụta ahụmịhe gbara gburugburu, na-enweghị ọtụtụ nkwupụta ma nke ahụ na-emezu kpọmkwem ihe ọ na-ekwe nkwa.
Insmụ ejima ANC
Ihe na: 10 June nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 10 June nke 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Twins ANC, Fresh´n Rebel ghọrọ usoro ihe ịga nke ọma
Clam Elite, onye ozo nke ANC site n'aka Fresh'n Rebel
Yealink UVC20, ezi enyi maka teleworking [Nyochaa]